Taariikhda My Butros » 5 Talooyin si ay u noolaadaan fog Xiriirka – Edition Student
Jacaylka & Sex Talobixinta loogu talagalay dadka waaweyn ay isqabaan.
NavigationHomeAdviceLove & SexTaariikhda FirstTalooyin OnlineFriendly Butros
by Taariikhda My Butros Shaqaalaha
5 Talooyin si ay u noolaadaan fog Xiriirka – Edition Student
Last updated: Dec. 02 2020 | 3 min akhri
Waqtiga Summer waa qayb ka mid qurxoon ee jiritaanka ardayga. Shaki kuma jiro waxa ku saabsan. Waxaad ka heli inay iska ilaawaan xaqiiqada dhabta ah mid aad ee dugsiga, wax yar ka nasato, hesho on tan, cabin cabbitaanada Maalmihii out of lows, iyo ugu xidhmaan qoyskaaga iyo saaxiibadaa magaaladiisa. Waxaa dhamaan sanqadhaha grand quruxsan dhab.
Marka laga reebo mid si faahfaahsan u yar ... aad dareento in aan dhamaystirnayn. Waxaad tahay sida koorta aan jalaato ah. Sida pizza aan cheese, sida Miley Cyrus aan kubad wrecking, Bonnie a cidlo adiga oo aan Clyde.
Waxaan ma ka hadlayaan la kala kaxeeyay aad mataano ah asaxaabta; Waxaan ku tilmaamayaa in markii ugu adag ee xiriirka ah ee loo yaqaan "separation masaafada dheer". Ka dib faqri sideed bilood cajiib ah dugsiga oo aad lover, aad labaduba waa inay ku laabtaan bayna gurigaaga iyo barto baxay xadhkahoodii ay tahay marka laga reebo iyadoo la ilaalinayo in uu hurayay gaar ah.
Waxaad si fudud u yeelan karaa iyo lagu shukaansi gabadha cute albaabka xiga oo ka dhacay si ay u tagaan inay isku dugsi, ama aad la kala yaabaa in ay kiiloomitir, badaha, laga yaabaa xataa qaaradood. Waxaa adkaato waqtiyada waana lahayn feat sahlan si ay u joogteeyaan xidhiidhka ka oo la gurato inta lagu jiro sanad dugsiyeedka.
Wax Well wanaagsan waxaan halkan idiin ahay.
Ugu horeyn, go'an tahay waa furaha.
Waa la yaab ma laha in kaliya kuwa u heelanahay in xiriirka ay ka dhigi doonaa soo dhaafay. Ruuxa. Duway keliyo ee xiriirka masaafo dhow aad. In aan la awoodin in la arko midba midka kale si maalinle ah u baahan tahay si joogto ah iyo dareen dheeraysay of xamaasad iyo daacadnimada joogta ah labada dhinac.
Ka faa'iidayso ka dhan technology weyn, qalabka iyo gizmos.
Waxaan ku noolnahay adduun digital kombiyuutarada, telefoonnada gacanta iyo technology oo xoojisay. Back maalintii kacayso maal ah oo keliya inaad wacdo qof telefoonka ... malmahaani annaga Skype karaa qof kasta oo adduunka ah ee dhammaystiran oo lacag la'aan ah. Waxaan leenahay u fudud, sidaa waxaa dhab ahaan waa in cudur daaranina. Technology waa qalab weyn in ay isticmaalaan, haddii ay tahay wada hadal texting oo joogto ah, hadalka telefoonka, mid ka mid ah warbaahinta bulshada xad-dhaaf ah ama Skype. Isticmaal oo inta badan ay isticmaalaan.
Hel hal abuur leh.
Masaafada ee u dhexeeya adiga iyo wax kaloo muhiim abuuraa fursado aad si ay u muujiyaan qaar ka mid ah hal-abuurka iyo xariif. Isticmaal warqadaha dhabta ah iyo qalin dhabta ah iyo warqad u dir sida ugu qadiimka, yaabin aad lover oo ubax dhiibay iyaga siday guriga (tixraac lambarka 2 iyo si online ka dukaan ubax) ama samayn booqashada yaab classic haddii ay suuragal tahay. Sida aad u fikirayso cap labiso iyo Tusinno asalnimada run.
Misna waqtiga aad samayn hesho in ay wada qaadannaa.
Maxaa yeelay, waxaad noqon doontaa marka laga reebo waayo, sidaas dheer, haddii aadan maareeyo si aad u hesho in booqasho ku tago oo ku adventures qaar ka mid ah waxa ay noqon doontaa shaki super gaar ah. Ma dhahayo waxa ay noqon doontaa sida goobta in ka taataabtay in roobka ka Buug ah, laakiin waxa ay noqon doontaa quruxsan dhow.
Xusuusnow in waxa aan dhammaadka wakhtiga dunidu ku.
Ya way ku adag tahay ka heli kartaa waqtiyada iyo waxaad u baahan tihiin in usu in booska uurjiifku iyo jiidmaysa (Waxaan halkaas- Ceeb ma aha) balse xusuusnow in masaafada waa qarsoodi ah oo caafimaad leh. Iyagoo lamaanahaaga marka laga reebo kaa caawin doona inaad wada dheeraad ah oo ku qiimeeyaan waqtiga aad iyo aad leedahay doonaa in loo isticmaalo in ay si degdeg ah ama waqti dambe. Sidaas fiican haddii aad bilowdo barbarta haatan xaq u?
Ha shantan talooyin u dhaqmaan sida DFID, jacaylka aad muddo bilo ah xagaaga oo aad noqon doontaa wanaagsanyahay. Tahay in aad u badan tahay in lagu a million jeer "weydiiyey meesha waa kala bar kale?"Iyo" waxa aad weli shukaansi dhammaan-magaceeda-?"Laakiin hadda waxaad si kalsooni leh u jawaabi karo" Waan hubaa in xiriirka joogtada ah isaga / iyada oo ay haatan tahay ee ay guriga "iyo" haa, aad sharad baan ahay ".
Guji si aad u wadaagaan on Twitter (Furmayaa suuqa kala cusub)
Guji si aad u wadaagaan on Facebook (Furmayaa suuqa kala cusub)
Guji si aad u wadaagaan on Reddit (Furmayaa suuqa kala cusub)
Fikradaha Winter Taariikhda
6 Sababaha Si saar Down aad telefoonka gacanta
Sida loo wajaho A Woman Online - Marka laga eego Naag A ee
Maxaa Ha Your Xayawaanka idinku saabsan
Taasoo keentay website The shukaansiga online abuuray si gaar ah u xayawaanka ku caashaqay. Haddii aad raadinayso lammaane nolosha, saaxiib ah u samee xayawaankaaga ama kaliya qof ay la joog leh, halkan aad u yeelan doontaa in ay si sax ah u hesho oo aad raadinayso - xayawaanka ku caashaqay adiga oo kale.
dheeraad ah & GT;
+ Talo shukaansi
+ Jacaylka & Sex
+ Taariikhda First
+ Talooyin shukaansi Online
+ Friendly Butros
Fikradaha ku saabsan Ammaanka
La kulan ka qayb galay Our
Love waxaa Sharing
© Copyright 2020 Taariikhda My Butros. La dhigtay by 8celerate Studio